तपाईको (मंगलबार असार १) को राशीफल -
२०७८, १ असार मंगलवार ००:५५ June 15, 2021 clickonLeaveaComment on तपाईको (मंगलबार असार १) को राशीफल
मानसिक शान्तिको लागि केही दान र पुण्यको काममा आफूलाई समावेश गर्नुहोस्। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंले सामाजिक कार्य र कार्यक्रमहरूमा भाग लिनु भयो भने मित्र मण्डली र परिचितहरू बढ्नेछन्। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। आफ्नो दृष्टिकोणमा उदार हुनुहोस् र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रो र प्यारो समय बिताउनुहोस्। तपाईंले अब उप्रान्त आफ्नो कामुक कल्पनामा बारेमा सपना देख्नु आवश्यक छैन; तिनीहरू आज साँचो हुन सक्छन्। आफ्नो घरमा आफ्नो मालिक र वरिष्ठहरूलाई निमन्त्रण गर्ने राम्रो दिन होइन। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा कुराहरू आज साँच्चै सुन्दर छन्। आफ्नो जोडीको लागि रमाइलो साँझको योजना बनाउनुहोस्।
आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तर्क र टकराव अनि अरूमा अनावश्यक दोष खोज्नेबाट बच्नुहोस। तपाईंको प्रेमीकासँग केही भेद उत्पन्न हुन सक्छ – तपाईंले आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्न गाह्रो पर्नेछ। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग तनाउमुक्त दिन बिताउनु हुनेछ।
अगाडि राम्रो समय आउँदैछ भनेर खुशी हुनुहोस् र तपाईंलाई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। आफ्नो रिजुम पठाउन वा साक्षात्कारको लागि राम्रो दिन। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
कुनै संत झैं व्यक्तिको आशिषले मनोशान्ति दिनेछ। तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा मित्रहरूले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नेछन्। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आजभोली कुनै खुशी छैन; आफ्नो जोडीसँग कुरा गर्नुहोस् र साँच्चै रमाइलो केही योजना गर्नुहोस्।
तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। तपाईंकी प्रिया केही रिसाएको जस्तो हुनेछिन् जसले तपाईंलाई दबाब थपिनेछ। साझेदारी परियोजनाहरूले सकारात्मक परिणाम दिनु भन्दा बढी समस्याको सिर्जना गर्नेछन् – तपाईं विशेष गरी कसैले तपाईंसँग फाइदा उठाउनको लागि आफैंले अनुमति दिएकोमा आफैमाथि रिसाउनु हुनेछ। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। लामो समय पछि आफ्नो मित्रसँग भेट हुने सोचेर गुल्टिंदै गरेको ढुँगा झैं तपाईंको मनको ढुकढुकी बढ्न सक्छ। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यममा आफैलाई संलग्न गर्नबाट जोगिनुहोस् – र तपाईंलाई आवश्यक भएमा आफ्ना घनिष्ट मान्छेको सल्लाह लिनुहोस्। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
एउटा मित्रको नराम्रो व्यवहारले तपाईंलाई अपमान महसुस हुन सक्छ। तर आफुलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई यसले दुःख नदेओस भन्नको लागि बरू जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्ना पाहुनाहरूसँग अशिष्ट नहुनुहोस्। तपाईंको व्यवहारले आफ्नो परिवारमा समस्या मात्र होइन, सम्बन्धमा पनि शून्यताको सिर्जना गर्न सक्छ। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन – साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
मित्र वा जानकारको स्वार्थी व्यवहारले तपाईंको मानसिक शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। बच्चाको अध्ययनलाई लिएर चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। अहिलेको क्षणमा तपाईंले केही समस्याको सामना गर्नुपर्छ तर यी क्षणिक हुन र केही समयमा मरिहाल्ने छन्। नियमित वैवाहिक जीवनमा, यस दिनले स्वादिष्ट मिठाईको रूपमा कार्य गर्नेछ।
पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। घर-सुधार गर्ने परियोजनाहरू विचार गर्नुपर्छ। तपाईंले प्रेममा हरेक दिन पर्ने आफ्नो प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग प्रेम गर्ने प्रशस्त समय पाउनु हुनेछ, तर स्वास्थ्यमा केही समस्या हुन सक्छ।
आफ्नो जोडीको सुंदर मुडले तपाईंको दिन रोशन हुन सक्छ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। कुनै मित्रको समस्याले तपाईंलाई नराम्रो लाग्नेछ र चिन्तित बनाउन सक्छ। निष्पक्ष र उदार प्रेमको लागि पुरस्कृत हुन सक्नुहुनेछ। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसँग जीवनको सबैभन्दा राम्रो साँझ बिताउन पाउनु हुनेछ।
मुश्किल स्थितिको सामना गर्दा तपाईं दुखी नहुनुहोस्। खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋण लिएको हुन्छ – केही दुखको आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। आज तपाईंले अरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु पर्छ तर बच्चाहरुसँग अतिरिक्त उदार हुनाले मात्र समस्या बढ्नेछ। आफ्नो प्रियको निष्ठामा शङ्का नगर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातचीत गर्दा आफ्ना कान र आँखा खुल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्यवान टिप पाउन सक्नुहुन्छ। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईको (शनिबार २०७६ चैत्र २२) को राशीफल
२०७६, २२ चैत्र शनिबार ०१:१२ April 4, 2020 clickon
तपाईंको आजको राशीफल (बिहिबार २०७६ श्रावण ३०) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
२०७६, ३० श्रावण बिहीबार ०२:२२ August 15, 2019 clickon
तपाईंको आजको राशीफल ( सोमबार २०७६ असोज २०) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, २० आश्विन सोमबार ००:३५ October 7, 2019 clickon